L0vetodream Inozivisa Mutsva Mavara uye Zvimiro zveApple Watch Series 6 | Ndinobva mac
L0vetodream Inozivisa Mutsva Mavara uye Zvimiro zveApple Watch Series 6
Kwangosara zuva rimwe chete kuti Apple kutanga chiitiko chitsva, uko kunotarisirwa kuunza michina mitsva uye inogona zvakare kunge iri kutarisira nhau dzayo akasiyana masisitimu anoshanda. Nezuva rimwe chete kubva, kubva kuL0vetodream Twitter account tinoudzwa kuti iyo Apple Watch ichave imwe yenyenyedzi dzehurukuro uye Ivo vachatidzidzisa mavara matsva uye pamwe chimwe chinhu chitsva.
L0vetodream Iyo inowanzoitika yekufungidzira kwaApple. Anowanzove akarurama nezvakafanotaurwa, kunyangwe kana zvasvika kune iyo Apple Watch, anga asiri kunyatsoita mushe. Akataura kuti Apple yaisazopa chero zvidzoreso kurinda munaGunyana. Asi uchiona kuti chiitiko chiri kuzoitwa musi wa15 uye kuti Apple Watch nhevedzano 6 inoonekwa mumadziva ese, achinja pfungwa.
Anosimbisa, kwete chete kuti achatanga modhi nyowani yeApple Watch, asi kuti achazviitawo nemavara matsva uye inototsigira nekuchaja nekukurumidza. Chinhu chinokurumidza kuchaja chingave chakanangana neiyo nyowani "yekurara" mashandiro ayo Apple akaunza muwatchOS 7. Iwe unofanirwa kuve neiyo wachi yakazara yakazara kuti igare zuva rese. Chimwe chinhu chisingafungidzike panguva ino, asi hei, zviregerere wega kune zvimwe zvese nezve wachi.
Iwo mameseji anotumirwa kubva kuL0vetodream account akapfupika uye haatombo kupa ruzivo, asi zvinotevera kubva kwavari zvatakakuudza mumitsara iyi.
mutsva mutsva weApple Watch
Meseji isinganzwisisike yaakaparura ndeye iyo yatinoburitsa pazasi uye iyo Unogona kutaura nezveApple kuvhura itsva iPad Mhando modhi Iyo iPad Air 4 ichave iri inodhura kupfuura iyo iPad Air 3.
Kwangosara anopfuura maawa makumi maviri nemana akasara kuti uwane. New Apple Watch uye nyowani iPad Mhepo, zvinoita kunge zvakajeka. Mavara matsva uye nekukurumidza kurodha. Tichafanira kumirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » L0vetodream Inozivisa Mutsva Mavara uye Zvimiro zveApple Watch Series 6
Iyi ndiyo Apple mask bhokisi
Kuunza Iwe Kumba, mutambo unonakidza wepuzzle wakasiyana neyakajairwa iwo